प्रधानमन्त्री ओलीसँग चीन भ्रमणमा को–को जाँदैछन् ? हेर्नुहोस् सूची - Deshko News Deshko News प्रधानमन्त्री ओलीसँग चीन भ्रमणमा को–को जाँदैछन् ? हेर्नुहोस् सूची - Deshko News
प्रधानमन्त्री ओलीसँग चीन भ्रमणमा को–को जाँदैछन् ? हेर्नुहोस् सूची
प्रधानमन्त्रीको भ्रमण दलमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन ‘अनन्त’, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाल, सांसदहरू, नेपाल सरकारका उच्च अधिकारी, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि र सञ्चारकर्मी सहभागी हुनुहुनेछ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार उहाँले चीनका वरिष्ठ नेताहरूसँग भेटवार्ता गर्नुहुनेछ । प्रधानमन्त्रीले नेपाल–चीन व्यापारिक मञ्च तथा विद्वत समूहलाई बेइजिङमा सम्बोधन गर्नुहुनेछ ।
भ्रमणकै सिलसिलामा केही सहमति र समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ । प्रधानमन्त्री ओलीले चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको राजधानी ल्हासाको पनि भ्रमण गर्नुहुनेछ । त्यहाँ उहाँले तिब्बतका प्रान्तीय नेताहरूसँग भेटवार्ता हुनुहुनेछ ।